योङ्गीनबाट भालु भागेपछि खोजी कार्य तिब्र – Eps Sathi
योङ्गीनबाट भालु भागेपछि खोजी कार्य तिब्र
July 13, 2021 818
दक्षिण कोरियाको ख्यङ्गिदो प्रदेशको योङ्गीन शहरमा रहेको एउटा ब्रिडिङ फार्मबाट गत हप्ता २ वटा एसियन कालो भालु फ’रार भएका छन। दुई मध्ये एउटा भालुलाई मा’रि’एपछि अर्को भालुको खो’जिकार्य ति’ब्र पारिएको छ। गत जुलाई ६ तारिखका दिन ति दुई भालुहरु फार्मबाट भागे’का थिए।
योङ्गिन शहरमा रहेको ब्रिडिङ फार्मका मालिकले स्थानिय सरकारमा गत जुलाई ६ तारिख जानकारी गराएका थिए। आफ्ना ३ बर्षिय २ वटा भालुहरु फ’रा’र भएको उनले जानकारी दिएका थिए। ति भालुहरु ६० किलो तौलको रहेको उनले बताए। विहान करिब १०:३० बजे तिनिहरु खोरबाट भा’गेका थिए।
फार्म मालिकको जानकारी पछि जङ्ग’ली ज’नावर नि’यन्त्रण डिपार्ट र वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भालु खोज्नका लागि सर्च अ’भियान सुरु गरेका थिए। उनिहरुले फार्म रहेको क्षेत्रको वरपरका पहाड तथा जङ्गलमा खोजी अ’भियान चलाए। खोजिकै क्रममा एउटा भालुलाई फार्मबाट १ किलोमिटरको दुरीमा रहेको एक घरनजिक देखिएपछी गो’ली हा’नि मा’रि’ए’को थियो।
तर अर्को भालुको कुनै नामो निशाना नभेटिएपछी २ दिनसम्म खोजि अभियान स्थ’गित भयो। स्थानिय योङ्गिन सरकारले भालुलाई मा’र्ने भन्दा पनि जिउँदै स’माउनका लागि आ’दे’श दियो। अर्को भालुलाई मारिएपछी पशु अ’धिका’रकर्मीहरुले यसको च’र्को बि’रो’ध गरेका थिए। भालु खोज्नका लागि ३ वटा ट्रा’प तथा फार्म वरपर क्यामेराहरु जडान गरिएका छन।
Prevकोरियामा बढ्यो तलब, अब महिनाको कति हुन्छ? बुझौं
Nextकोरियामा तातो हावाको प्र’कोप आउँदै, कहिले आउँदैछ? जानिराखौं।